अभिनेत्री आँचल शर्माको विवाह फागुनमा पक्का पक्की ! —
काठमाडौँ । चर्चित मोडल तथा नायिका आँचल शर्माको विवाहको कुरा लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेकी छिन् । अभिनेत्री आँचलले केही समय पहिले आफू डा. उदिप श्रेष्ठ सँग गहिरो प्रेममा रहेको खुलाएकी थिइन् । करिब १ बर्षअघि एक कार्यक्रममा भेटपछि नजिकिदएका नायिका आँचल शर्मा र डाक्टर उदिप श्रेष्ठको प्रेम अहिले गहिरो छ । एक वर्ष देखिको चिनजान र प्रेमलाई यी दुवैले अब विवाहमा परिणत गर्देछन् ।
नायिका आँचलले हालै एक मिडियामा आगामी फागुनमा बिहे गर्ने फाइनल भएको बताएकी छिन् । आगामी फागुनमा बिबाह गर्ने तयारीमा भए पनि कुन दिन बिबाह गर्ने भन्ने टुङगो नभएको उनले बताएकी छिन् । आंचलले उदिपको आगमनले आफ्नो जीवनमा सर्वाधिक खुशीको पल रहेको बताएकी छिन् ।
जोनी जेन्टलम्यान, नाइ नभन्नु ल ४, सत्रु गते, ब्ल्याक लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी आँचल अब चलचित्र ‘झिंगे दाउ’ मा खेल्ने तयारीमा छिन् ।